Soo hel kaararka ugu wanaagsan ee dijitaalka ah Kirismaska ​​| Abuurista khadka tooska ah
Judit Murcia | | Khayraadka, habyaalada
Mid ka mid ah caadooyinka Kirismaska ​​ugu quruxda badan, iyo inaan luminayno waqtiga waqtigiisu waa kaararka salaanta ee kirismaska.
ka teknooloojiyada cusub naga yeel Aan la jaanqaadno waqtiga aan ku nool nahay. Waxaan aaminsanahay inay tahay inaad lahaato maskax furan oo aad tixgeliso dhammaan xulashooyinka. Internetka waxaan ka heli doonnaa fursado aan dhammaad lahayn oo aan kaga yaabinno kuwa aan jecel nahay. In kasta oo aynaan ahayn inaan meesha ka saarno boostada gacanta, taas oo waliba noqon karta ikhtiyaar wanaagsan inkasta oo ay u malaynayaan a maalgashi ka weyn waqtiga. Si kastaba ha noqotee, qoraalkan waxaan arki doonaa fursado badan oo kala duwan dhadhan kasta.
1 Kaararka dijitaalka ah
4 Barnaamijyo loogu hambalyeynayo kirismaska ​​iyadoo loo marayo moobil
6 Kaararka Shaambada Cas
7 Barnaamijyada jumladaha kirismaska
8 Kaararka boostada leh
11 Kaararka Nico
Kaararka dijitaalka ah
El Qaab digital ah Waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu isticmaalka badan sanadihii la soo dhaafay. Caadiga ah sawirka qoyska hada waxaa soo diray WhatsApp oo ay la socoto qoraal kooban oo loogu hambalyeynayo ciidaha Kirismaska. Waxaan haynaa ikhtiyaarro kale oo dijitaal ah si aan u abuurno salaanteena kirismaska ​​oo ka hal abuur badan kuwa kale ee aan la xiriirno.
Waan ku tusaynaa codsiyada iyo boggaga internetka qaarkood si aad u abuurto Salaanta kirismaska si fudud oo gebi ahaanba bilaash.
Haddii aan u heellan nahay naqshadeynta, ikhtiyaarka ugu muuqda waa in la isticmaalo a tafatirka barnaamijka xirfadle sida Photoshop ama Illustrator. Si kastaba ha noqotee, waxaan u baahanahay hubaal aqoonta y awoodaha in dhammaanteen aynaan haysan. Ha welwelin, maxaa yeelay way jiraan tifaftireyaasha sawirrada khadka tooska ah in ka sokow ahaansho bilaash iyagu aad bay u yihiin fududaan isticmaalka. Waxay awalba haysteen dhammaan alaabtii Kirismaska ​​si aan ugu abuuri karno kaarka kirismaska ​​oo aan jecel nahay.
Tusaalaha ugu horeeya ee aan kuu soo qaadaneyno waa Fotor, tifaftire muuqaal ah oo noo oggolaanaya:
Samee collage, taasi waa, abuur halabuur sawirro kala duwan ah.
Naqshad oo leh ilo kala duwan.
Marka aan webka ku jirno, waa inaan tagnaa oo aan dooranaa ikhtiyaarka "Abuur naqshadXulashooyinka soo bixi doona ayaan dooran doonnaa "kaarkaIn la abuuro kaarka kirismaska.
Waa inaan maskaxda ku haynaa inay tahay degel ku yaal ingiriisi, sidaas darteed, dhammaantood Waxaan ku qasbanaaneynaa inaan ku sameyno baaritaanka Ingiriisiga si aad natiijo u hesho. Dhinaca waxaan ku dari karnaa istiikarada ah "stickers”. Xaaladdan oo kale waxaan ku qornay "baraf", baraf Isbaanish, iyo fursado badan ayaa u muuqday. Waxaan u jiideynaa naqshadeynta aan mar dambe jeclaan miiska shaqada. Waan awoodnaa dhig sida aan jecel nahay oo isaga sii cabir ku filan.
Markii aan helno naqshadeynta dhammaatay, xagga sare ee websaydhka waxaan ikhtiyaar u yeelan doonnaa keydi faylka kombuyuutarkaaga ama waan awoodnaa wadaag si toos ah uga socota shabakadda shabakadaha bulshada.
Pickmonkey es qalab ku takhasusay sameynta kaararka dhammaan noocyada xafladaha, dhacdooyinka ama qaybaha. Ayaa badan shaabab horey loo abuuray si loogu fududeeyo isticmaalaha inuu abuuro naqshad u gaar ah.
Markii aan dooranayno qaybta aan rabno inaan ku shaqeyno, waxaa naloo muujin doonaa arrimo kala duwan oo diyaar u ah inaan wax ka beddelo baarka ku yaal dhinaca. Waan awoodnaa Habee adoo kudaraya sawiradeena iyo qoraaladayada.
Barnaamijyo loogu hambalyeynayo kirismaska ​​iyadoo loo marayo moobil
Xulashada ugu macquulsan hadaanan waqti badan haysan ku sameyso kaarka kirismaska ​​mobilkaaga. Waan sameyn karnaa inta aan baska sugeyno, qolka sugitaanka ayaan ku jirnaa ama waxaan haysannaa waqti firaaqo ah. Intaa waxaa dheer, waan awoodnaa u dir dhammaan kooxahayada WhatsApp.
Codsiga Justwink Waxaan u isticmaali karnaa inaan ku abuurno nooc kasta oo hambalyo ah. Kuwa ay shaabab waa asal, waxayna na siinayaan fursad aan ku ku dar codka, kaas oo na siinaya wax lagu daro oo aaney dhammaan barnaamijyadu bixin. Ayaa loo heli karaa macruufka y android.
Kaararka Shaambada Cas
Waa codsi kale oo ka baxsan wixii caadiga ahaa. Waxay leedahay a noocyo kala duwan oo arrimo ah in aan u habeyn karno sida aan jecel nahay. Intaa waxaa dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan u dirno iyaga dijitaal ahaan shabakadaha bulshada ama ikhtiyaarka ah daabac. Guji si aad u soo dejiso macruufka o Android.
Barnaamijyada jumladaha kirismaska
Codsigan xoogaa wuu ka duwan yahay, laakiin waxaan dooneynay inaan ku darno maadaama ay runtii xiiso yeelan karto. Waa barnaamij taas ururi weedho badan oo Kirismas ah. Waxay ka heli karaan qoraallada asalka ah si ay ugu diraan kooxahaaga saaxiibbada WhatsApp ah.
Waxay noqon kartaa mid waxtar leh haddii aad ka mid tahay dadkaas kuwa ma taqaan waxa la qoro. Waxaan hubnaa inaan ku dhiirrigelin doono boggan. dhagsii Halkan.
Kaararka boostada leh
Ikhtiyaar kale oo aan runtii jeclahay ayaa ah kaararka boostada leh, fiidiyowyo noocyo kala duwan leh si loogu hambalyeeyo kirismaska ​​si ka wanaagsan. Aynu iftiiminno qaar shabakadaha taas oo noo ogolaaneysa inaan wadaagno kaararka boostada ee astaamahan.
Websaydhkani wuxuu noo oggolaanayaa inaan abuurno kaararka Kirismaska ​​oo midabkoodu aad u sarreeyo, waan ku samayn karnaa iyaga dhaqdhaqaaq iyo xataa ku dar muusig. Taasi waxay ka dhigeysaa kaararka asalka ah ee hal abuurka leh. In kasta oo haddii aynu ka muxaafid badan nahay, aan samayn karno a kaarka caadiga ah. Runta ayaa jirta inay jirto dhadhan kasta.
Waxay leedahay noocyo aad u ballaaran oo kaararka boostada leh. Khasaaraha kaliya ee aan ku dhejinay boggan waa taas kuu oggolaan maayo inaad iyaga astaysto, maadaama animations-ka horey loo abuuray. dhagsii Halkan oo fiiri dhammaan xulashooyinkaaga.
Tani boorka ayaa kuu oggolaan doonta inaad wax abuurto runtii boosto aad u qosol badan taas oo ay halyeeyadu kugu noqon doonaan. Waa in wajigaaga dhig iyo tan qofkasta oo aad rabto jirka jirka. Elves ayaa qoob-ka-ciyaaraya inta lagu jiro fiidiyowga, sidan, waxay u muuqan doontaa inaad qoob-ka-ciyaareyso si aad ugu hambalyeyso ciidaha. Hayso a taabasho kaftan ah kaamil ah si aad u hesho dhoola cadeyn ah qofkasta oo aad u dirto. Aad buu yahay fududahay in la isticmaalo. Waxaad ku qaadan kartaa sawirka xilligan kamaradda kombiyuutarka, ama waxaad sudhan kartaa mid ka mid ah oo aad ku leedahay qolka-sawirka.
En shabakadan, karaa habeyso kaararka kirismaska si loogu diro xiriir kasta. Waa in aad iska diiwaangeli macluumaadkaaga si aad marin ugu hesho kaararka animated-ka waxaadna ku keydin kartaa markii dambe ee aad u dirto. Shakhsi ahaan, maahan mid ka mid ah websaydhada ugu fiican halkaas. Sidoo kale ma hayaan dalab soo jiidanaya dareen badan.
Sidaad aragtay, kala duwanaanshaha xulashooyinku waa weyn yihiin midkoodna waan dooran karnaa. The natiijada Way fiicnaan doontaa saaxiibbadeen iyo qoyskeenuna waxay jeclaan doonaan inay helaan salaanta kirismaska. Dhaqanka yaan laga lumin!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka dijitaalka ah ee Kirismaska